China 10 iberibe mmanya / Hyamine Hichapụ ụlọ ọrụ na-emepụta | Zhongrong
A na-anwale arụmọrụ bactericidal nke ngwaahịa a dịka ọkọlọtọ mba site na ụlọ ọrụ nyocha iru eru dị mkpa. Onodu ogwu ogwu nke ogwu a di nma megide Escherichia coli, Staphylococcus aureus na Candida albicans nwere ike iru 99.99% n'okpuru onodu ule maka otu nkeji. Nsonaazụ bụ maka ntụnye.
10 Pntụgharị Mkpọ nke 75% Ammanya Woku
Nkọwapụta akpa nkwakọ akpa ：
Ogologo * obosara * elu 160 * 95 * 15 mm
Ihe ndị dị mma：
Akara ngosi nke TECH-BIO 、 aha Chinese & Bekee
Back ọcha ：
Ọ nwere ike jiri nwayọ hichaa anụ ahụ na anụ dị nro. Odi nma maka ihicha aka, akpukpo aru, wdg.
Aha ngwaahịa： 75% Mmanya Na-ehicha
Isi mgwa ihe： 75% Mmanya （V / V） Mmiri dị ọcha 、 Spunlace na-enweghị akwa
Jiri nsoO kwesịrị ekwesị maka ihichapụ aka, ihu, akpụkpọ na-emebibeghị na akụkụ niile nke ihe. Zere iji ya na anya, ọnya na akụkụ ndị ọzọ nwere mmetụta.
Ojiji: Dọkapụ ihe mmado ahụ. Jiri ya mgbe mmịpụta ya ma mechie ya n'oge. Oge ime ihe maka aka bụ ≤ 1min, oge emere ihe maka akpukpo aru bụ ≤5min, oge ime ihe ndị nkịtị bụ -30min.
Dọ aka na ntị： Na-echekwa na jụụ na nkụ. Maka iji mpụga, zere ọnụ na ịkpọtụrụ anya. Enwere ike iwe ọkụ, zere ọnọdụ dị elu ma ọ bụ ọkụ ọkụ. Ndị mmanya na-egbu na-eji nlezianya eji ya. Debe ya ka aka umu aka na umu aka ghara iru ya. Biko tinye ya na ahịhịa ahịhịa mgbe i jiri ya rụọ ọrụ. Agbanyela n'ime mposi iji zere mgbochi. E kwesịghị iji ụmụ ọhụrụ n'okpuru afọ 3 mee ihe.
Standardkpụrụ ahụikeGB 15979
Executive ụkpụrụ ：GB / T 27728-2011
Nkọwapụta ngwaahịa ：200mm X 150mm
Net ọdịnaya: 10pcs
Oge nkwado: Afọ abụọ
Production ogbe nọmba: Hụ nkwakọ ngwaahịa
Amachibido ụbọchị eji: Hụ nkwakọ ngwaahịa
Ikike by Onyeka Onwenuikpo ọkụ Ltd.
Tinye: Nke 1, Changqian Road, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province
Emeputa: Jinhua Changgong nhicha Products Co., Ltd.
Tinye ：Mpaghara Ọrụ Ditian, Xiaoshun Town, Jindong District, Jinhua City, Zhejiang Province
Akwụkwọ ikike No: (Zhejiang) Asambodo asacha (2018) Nke 0071
Nke gara aga: Mpempe 50 Mmanya na-egbu egbu / Hyamine Hichapụ
Osote: Mpekere 150 Mmanya / Hyamine Hichapụ